Bogga digniinta tarjumaadda waa iskuday daacadnimo ah oo loogu talagalay in lagu qoro farriimaha Neal V. Frisby khudbadiisa CD-ga.
Baybalka oo ku rog garaafyada
Duubista Nabiga ah PDF
Kitaabbadii Nabiga ee nuggets
Sare u qaadid
Buugaagta wacdiga Nuggets
U diyaargarowga bixida
Ciise waa soo socdaa!
Bogga digniinta tarjumaadda waa iskuday daacadnimo ah oo loogu talagalay in lagu qoro farriimaha Neal V. Frisby khudbadiisa CD-ga. Ujeedada ayaa ah in loo abuuro fursado badan dadka si ay ula qabsadaan fariimahan waxyooday gaar ahaan kuwa doorbida aqrinta halkii ay ka dhageysan lahaayeen khudbadaha iyadoo loo marayo qaabka maqalka ee CD-ga ah.
Fadlan la ogeysiiyo in wixii qaladaad ah ee ku saabsan qorista fariimahan aan loo nisbeyn karin fariimihii asalka ahaa laakiin khaladaadka ka yimid dadaalada qorista; taas oo aan masuuliyadeeda iska saarayno. Waxaan sidoo kale dadka ku dhiirigelinaynaa inay dhageystaan ​​fariimaha asalka ah ee CD-ga.
Dadka doonaya inay helaan CD-yada asalka ah ee maqalka ah, DVD-yada iyo buugaagta Neal Frisby waxay kala xiriiri karaan xafiiska Neal Frisby xiriiriyaha ku lifaaqan - www.nealfrisby.com Sidoo kale su'aasha ku saabsan qoraalladaan waxay noo soo gudbinayaan farriimaha annaga oo u soo dirayna cinwaankayaga xiriirka.
Runtii waxaynu joognaa dhamaadka qarniga. Qorraxdu way sii dhacaysaa ummaddan weyn iyo adduunka oo dhan. Xoriyada sidaan ognahay mar dhow way baabi'i doontaa. Awoodda lagu markhaati furayo injiilkan runta ah ayaa dhawaan xidhmi doona. Ummaddani waxay ku bilaabatay halgan weyn oo ay ku raadinayso xorriyadda iyo xaqa ay u leeyihiin inay doortaan ereyga Eebbe ee runta ah. Sida la arki karo, cadaadis weyn ayaa ku imanaya dhammaan quruumaha rumaystay Ilaaha runta ah. Bishan waxa aan heli doonaa xigasho gaar ah oo ka imanaysa maktabadda Brother Frisby si ay u keento muhiimadda markhaatifurka ee saacaddan dambe. Ilaah wuxuu la jiraa dadkiisa inuu sameeyo shaqo degdeg ah, gaaban iyo mid xoog leh, waayo tani waa saacadda jirrabaadda ee Qorniinku in badan sheegay. Rev. 3:10, "Maxaa yeelay, waxaad xajisay ereyga dulqaadashadayda, sidaas daraaddeed waxaan kaa dhawri doonaa saacadda jirrabaadda oo ku iman doonta dunida oo dhan inay jirrabto kuwa dhulka deggan." Oo hadda xigasho ka timid Neal Frisby. Runtii tani waa wakhtiga goosashada! Kaliya waxa aan u samayno Ciise ayaa runtii waari doona weligeed. Waxyaalihii kale ee dhulka ku jiray oo dhammu way wada baabbi'i doonaan ama way dhammaan doonaan. - "Laakiin nafta rumaysta waxay ku qaalisan tahay Ilaah hortiisa! - Tani waxay u badan tahay inay dib u soo celin doonto xusuus badan, laakiin waxaad maqashay heestii injiilka ee hore ee 'Keenida Xirmooyinka.' -Hagaag, ma jirto waqti badan oo tan lagu samaynayo. - "Mar dhow jilib kastaa wuxuu u sujuudi doonaa Ciise hortiisa, carrab kastaana wuu qiran doonaa sida Qorniinku leeyahay! Markhaatigeena iyo badbaadinta nafaha ayaa noqon doona muhimadda ugu weyn waqtiga aan isaga arki doonno! Isagu wuu og yahay wax kasta oo mid kasta oo inaga mid ah uu samayn doono!” – “Maalintu waa fogaatay, qorraxdu waa eber saac! Habeenku wuxuu u imanayaa sida hadh madaw oo nagu sii faafaya! Ruuxa degdegadiisu waxay yidhaahdaan, shaqeeya inta iftiinku weli jiro; waayo mugdiga dembiga iyo kalitalisnimada ayaa dhawaan la wareegi doona meerahan.” Waa. 43:10 Rabbigu wuxuu leeyahay, Idinku waxaad tihiin markhaatiyaashaydii, iyo addoonkaygii aan doortayba, inaad ogaataan oo aad i rumaysataan, oo aad garataan inaan anigu isagii ahay. aniga!” Waxaan ku jirnaa saacaddii xoogga xoogga leh si aan u galno waddooyinka waaweyn iyo deyrarka! Martiqaadkii wacitaanka cashada ayaa ku dhow inuu dhammaado! Maqla erayga Rabbiga; waayo, belaayo weyn baa mar hore la sii sheegay waa soo dhow dahay. Sida loo arko daruur meel fog ka imanaysa, ayay si lama filaan ah ugu soo degi doontaa dad illoobay kii abuuray. - Kuwa aaminka ah waa la qaadi doonaa, dhulkana waxaa loo gacangelin doonaa kuwa xaqa daran iyo kuwa sharka leh. Waxaynu joognaa saacaddii uu yidhi, Kolkiiba manjada ayuu saaray, waayo, beergooyskii waa yimid. (Markos 4:29) Tani waxay muujinaysaa inay noqon doonto mid degdeg ah, degdeg ah, shaqo gaaban. Siduu u yidhi, Bal eega, anigu dhaqsaan u imanayaa. - Muujinta dhacdooyinka waxay noqon doontaa lama filaan waxayna u dhici doontaa si degdeg ah! – La yaab lama filaan ah oo ku noqotay adduunka. Oo markiiba nacasyadu waxay ogaan doonaan in kuwii la doortay ay meesha ka baxeen! "Haddaba hadda oo la goosanayo roobka dambe, shaqadiisa ugu muhiimsan, ayaa bilaabatay inay dhacdo!" Waa in aan qalbigeenna ku haysanno duco maalin kasta sida xoogga Ruuxa Quduuska ah uu keeno carruurta ugu dambeysa ee Rabbiga. Dunidu waxa ay u socotaa dhacdooyin la yaab leh oo lama filaan ah si ay u oofiyaan waxsii sheegyada ku saabsan kaniisadda iyo dawladda riddada xun! Ku saabsan maadooyinkan iyo shaqada goosashada injiilka, Rabbigu wuxuu oofinayaa waxsii sheegista oo wuxuu siinayaa dhammaan noocyada calaamooyinka si loo xaqiijiyo u dhawaanshihiisa! Samooyinku waxay muujinayaan iyada, calaamooyinkuna waxay muujinayaan badda, oo dabka dhulkuna isagay saadaaliyaan. Baddii way guuxaysaa, dhulkuna wuu gariirayaa! Umado badan baa dhammaadkooda ku jira. Waqtiyo halis ah! Laakiin sidoo kale waxaan ognahay in dhibaatooyinka dhaqaale ka dib Baybalku wuxuu ka hadlayaa in kaligii-taliye uu soo saari doono barwaaqo adduunka iyo isbeddello waaweyn oo ay ku jiraan qaabdhismeedka. (Daan. 8:25) - Markaa waxaynu og nahay hadhkii amiirkii Roomaanka inuu halkan joogo oo uu diyaar u yahay inuu kaco! Sidoo kale dhacdooyin muhiim ah ayaa iman doona dhawaan iyo maalmaha soo socda. Hubso oo fiirso maalmaha soo socda iyadoo Ilaah muujin doono calaamooyin badan oo sheegid ah oo ku saabsan dhammaadka wakhtiga. - "Qaylada saqda dhexe waxay ku soo socotaa kuwii uu doortay." - "Runtii waxaas oo dhami waa ku filan yihiin in Masiixiyiin kasta oo miyir qaba oo feejigan. Calaamooyinka meel walba noogu sheeg inuu xataa albaabka joogo!” Xigasho dhammaad Warqadani waa inay keentaa mid kasta oo Masiixi ah si uu u ogaado in degdegga ah ee markhaatifuriddu ay runtii nagu soo wajahan tahay oo dhammaan waa inay bixiyaan dadaalkooda ugu wanaagsan. Bishan waxa aanu siidaynaynaa mugga Nambarka Koowaad - Buuga Warqadaha Bilaha ah (June 2005 ilaa Julaay 2008) iyo sidoo kale DVD gaar ah, "Qofkii Doona." (Hoos ka eeg wax bixinta Ilaah wuxuu saaray barako cajiib ah dhammaan intii u istaagtay adeeggan. Runtii aad iyo aad ayaan uga mahad-naqayaa dhammaan taageerada la siiyay wasaaraddan. Naf badan ayaa la badbaadiyay oo lagu baraarugay saacaddan dambe ee aan ku nool nahay.
Fiidiyowyo iyo Cajalado
Markhaatigii Jannada iyo Naarta
Tuug Taxanaha Habeenkii ah
Neal Frisby waano
Toogasho mucjiso bogsiisay Christian
Halkan guji si aad u hesho Baybalka oo u rog garaafyada
Buugaagta buugaagta duubista ee Neal Frisby
Hadda waxaa lagu heli karaa mugga I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX iyo X
Weydiiso buugyarahaaga yaabka leh hadda!
Buugaagta, CD-yada iyo fiidyowyada
la xiriir: www.nealfrisby.com
Hadday tahay Afrika, buugaagtan iyo Mowduucyadaas
la xiriir: www.voiceoflasttrumpets.com
ama wac + 234 703 2929 220
ama wac + 234 807 4318 009
Markii aan tagno markaa way rumaysan doonaan.
Copyright © 2020 Digniinta Tarjumaadda Dulucda Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya
Made la Shirkadda Twin Software Development